परिचय–पत्र बुझ्दै के भने राउटेले ? – Vision Khabar
परिचय–पत्र बुझ्दै के भने राउटेले ?
। ३० असार २०७५, शनिबार २१:२६ मा प्रकाशित
दैलेख । असार सकिनै लाग्दा हराभरा पहाडको काखमा चिटिक्क कपडाले सिंगारिएको बस्ती । वारीबाट हेर्दा टालटुल गरेजस्ता देखिने झुपडी जति नजिक पुग्यो उनीहरुको दिनचर्या आफ्नै तानको थियो । बस्तीमा को आयो किन आए कुनै उत्साह थिएन् । मात्र मतलब थियो आफ्नै कामको । कोही पानी बोक्दै थिए कोही टहरोमूनीको सुत्ने आँगन बनाउँदै थिए भने कोही साँझको अगेनामा बाल्ने दाउराको जोह गर्दै थिए ।
यो जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे जातीको दैनिकी हो । दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ गर्चा पाल्ते खोला किनारामा सरेका राउटी जाती साउने संक्रान्ति मनाउने चटारोमा थिए । यो उनको ठूलो चाड तिहार जस्तै हो । बस्तीका अधिकांश पुरुषहरु सिकार खेल्न जंगल हानिसकेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राउटेको अभिलेख राख्न गुराँस गाउँपालिकालाई परिचय–पत्र वितरण गर्न परिपत्र गरेको थियो । सोही अनुसार गुराँसले राउटे बस्तीमा पुगेर परिचय–पत्र दिन गएपनि उनीहरुको प्रतिप्रश्नले पुगेका सरकारी कर्मचारीहरुलाई खिन्न बनाइदियो ।
सरकारी जम्बो टोली राउटे बस्ती छिर्दा सहजै परिचय पत्र बुझिदेलान भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । लावालस्कर लागेर गएको टोली बस्तीमा पुगेर राउटेलाई बोलाउँदा केही बेर आइदिएनन् । राउटेले भान्जी मानेकी राउटे प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीको आग्रहमा केही राउटे कार्यक्रम स्थलमा सहभागी भए । तैपनि उनीहरुले खुलेर परिचय पत्र लिन मानिरहेका थिएनन् ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले वरिष्ठ राउटे मुखिया महिनबहादुर शाहीलाई परिचय–पत्र दिन खोजिन् । महिनबहादुर हच्किदै भने, ‘मुखिया शिकार खेल्न गएका छन् उनी जे भन्छन् त्यही अनुसार बुझौंला ।’ राउटे समुदायका मुखिया सूर्यनारायण शाही शिकार खेल्न गएकाले मुखियाको आदेशविना अरु काम गर्न मिल्दैन्थ्यो । तर भान्जी सत्यदेवीले परिचय–पत्र बुझ्न मामा महिनबहादुरलाई आग्रह गरिन् ।
महिनाबहादुरले भने– मन नलाई नलगाई परिचय पत्र बुझे । ‘पैसा राख्ने त ठाउँ छैन सरकारले दिएको परिचय–पत्र लिएर के काम’ प्रश्नगर्दै महिनबहादुर भने । यत्ति बोल्न नसक्दै सहभागीले थपपछि बोल्न दिन्छौं भन्दै अन्य राउटेहरुलाई परिचय पत्र बाँड्न थाले । परिचय पत्र लिनकै लागि अर्का मुखिया वीरबहादुर शाहीले पनि महिनबहादुरको जस्तै व्यवहार देखाए ।प्रदेश ७ को अछाम र कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत तथा प्रदेश ५ का दाङसम्मको जंगलमा फिरन्ते जीवन जिउँदै आएको यो समुदायलाई यसअघि नै नागरिकता दिन पहल गरेका थिए ।
फिरन्ते जाती राउटेलाई तत्काल सामान्य जीवनयापन गर्न नसकिने भएकाले विस्तारै यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेर स्थायी बसोबास गराउन सकिने तर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेको छ । सरकारले नै पठाएको निर्णायनुसार राउटे बस्तीमै पुगेर परिचय–पत्र बाँडिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । राउटेलाई दिएको परिचयपत्रका आधारमा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजता हुने पनि विश्वास उनको छ ।
जनता समचारबाट साभार